राजाराम पौडेल - कान्तिपुर समाचार
को को भए ट्यालेन्ट ?
स्टेजमा पुगेर दर्शकमाझ प्रस्तुति राख्न पाउँदा बालबालिका उत्साहित थिए  । दर्शकका रूपमा आफ्ना साथी र अभिभावकलाई पाएका थिए  ।
रंगीविरंगी अनुहार, हातहातमा रंग  । कसैसँग पिचकारी, कसैसँग सफा पानी भरिएका बेलुन  ।
(पोखरा) - फुटबल खेल्न मज्जा आउँछ ? सबैको एकै स्वरमा उत्तर आयो– ‘मज्जा आउँछ  । ’ शनिबार पोखरा रंगशालामा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वखेलाडीसमेत रहेका प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङ यसै गरी हौस्याउँदै थिए  ।
योहो अन्नपूर्ण प्राकृतिक–ऐतिहासिक संग्रहालय  । कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका १ भीमकालिपाटन बगरमा रहेको यो संग्रहालयलाई पुतली संग्रहालय भनेरसमेत चिनिने गरिन्छ  ।
विद्यार्थीहरूमा अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराउन न्यु ग्यालेक्सी स्टार प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ  । प्रतियोगितामा लिटिल स्टार र स्कुल स्टारतर्फ गरी ५१ विद्यार्थी सहभागी थिए  ।
राजाराम पौडेलका लेखहरु :
पोखरा रंगशालाको फुटबल मैदान नजिकैको चौरमा गएको बुधबार बिहान बेग्लै माहोल थियो ।
प्रदर्शनीमा लहरै मिलाएर राखिएका विभिन्न चित्रकला । हरेक कृतिले कला पारखीलाई तानिरहेझंै । यस्तै माहोल थियो– पोखरा आर्ट ग्यालरी महेन्द्रपुलमा आयोजित आठदिने राष्ट्रिय कला प्रदर्शनीमा । शान्ति, पर्यटन र कला प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजित प्रदर्शनीमा सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व थियो ।
पोखरामा आयोजित १४ औं संस्करणको ‘सानी परी एन्ड सानो बाबु’ पोखरा अन्तर्गत सानो परी पोखराको उपाधि विन्ध्यावासिनी पोखराकी प्रार्थना रेग्मीले जितेकी छन् ।
हरेक बालबालिकासँग फरक प्रतिभा हुने गर्छ । अवसर पाए उनीहरूको प्रतिभा प्रकट हुन्छ । अवसर नहँ‘दा प्रतिभावान् बालबालिकाले पनि आफ्नो क्षमता देखाउन सकिरहेका हुन्नन् ।
सबैको लक्ष्य एउटै छैन  । तर उनीहरूमा केही सिक्ने उत्सुकता भने छ  ।